10KGS Monofilament Plastic Waya, China 10KGS Monofilament Plastic Waya Manufacturers, Suppliers, Factory - Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd
Plastic Baling Waya
Ahịhịa cutter Parts
Lọ ọrụ ụlọ ọrụ
>lọ>ngwaahịa>Plastic Baling Waya
Griin haus Waya
3 Core Braid PET Teepu Azụ
Faiba glaasi USB Puller
Ngwa teepu azụ na -ekwe Spring
Ngwakọta Azụ Naịlọn
Mmiri Steel USB Puller Fish Mezie
Ngwongwo Achara Nchara
WhatsApp/Wechat/Ìgwè:+ 86 13586680186
Tinye: #3 Ind & Td Road, Jishigang Industrial Park, Yinzhou District, Ningbo, 315171, PR China
10KGS Monofilament Plastic Waya
RDF, ma ọ bụ jụ mmanụ sitere na ya, na -eji teknụzụ na -ewepụta ume site na mkpofu na -adịghị mma maka imegharị ihe. N'ịghọta mkpa ọ dị maka eriri baling dabara na RDF, anyị mepụtara ngwaahịa a dabara maka ịcha ntutu maka ebumnuche nsure ọkụ.
Mgbe ị na -ehicha ma na -ekechi ihe mkpofu siri ike maka ịkpọ ọkụ, a ga -ewepụrịrị waya baling ọdịnala ka usoro ọkụ wee malite. Nke a bụ ọrụ siri ike ma dịkwa oke ọnụ.
JUDIN Plastic Wire ọhụrụ anyị nke Judin mepụtara ma rụpụta nwere ike gbaa ya ọkụ n'oge usoro nsure ọkụ na -enye ọnụ ahịa kalori.
Ogologo kwa eriri igwe: 560 m
Ibu ibu kwa mita: 0.018 kg
Akụkụ nke mpịakọta: φ 330 x 250mm
Nkwụsịtụ nkwụsịtụ n'otu ogologo: 5000 N
Nkwụsị tensile na okirikiri nwere eriri: 4800 N
Elongation na ezumike n'otu ogologo: 0.15
Elongation na ezumike na eriri: 0.09
Enwere ike ịtinye bales n'ime ọkụ a fụchiri nke ọma na -etinyeghị aka nke ga -azọpụta oge na ego site na imeziwanye usoro nhazi.
Enyere ya na 560 Mita reels, na -atụ naanị kilogram 10, nke ya na ihe dị ka kilogram 30 nke waya nchara. Ya mere, mgbe etinyere ya na RDF/SRF Baler nwere okpoko nri nri (nke dị maka ịtụ) njikwa na nchekwa ọrụ ewepụtara iji gbanwere Reels na -ebelata nke ukwuu, nke bụ abamuru nye ndị na -arụ ọrụ.
Reel nke ọ bụla ga -emepụta bales 120 (dabere na nha nke 1.2m X 1m X 1m) ma chekwaa nnukwu oge maka ndị ọrụ. Waya rọba Judin nwere eriri na -emebi emebi nke ya na waya nchara dị ala ma kwụsie ike/na -arụ ọrụ.
Ojiji JUDIN Plastic Wire na -emebi ntaramahụhụ nke ọtụtụ ndị na -etinye ọkụ na EU na -amanye ugbu a iji weghachite waya nchara n'ime ọkụ ha, wee ruo ugbu a na -emepụta ego efu.
Ndị ahịa na -eji JUDIN Plastic Wire ga -emepe ebe/ohere ndị ọzọ iji hazie ihe ha.
Line Nylon Trimmer
Plastic Film Polyester Waya griin haus Parts
Buru onye mbu mara banyere ahia anyi ohuru
Detuo aka nri © 2021 Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd